Izolo I ebuyela ekhaya evela Okey ukuba "teshke". Kimi, owesifazane othile weza isikhwama esikhulu plastic okudla. izenzakalo Ngaphezu kwalokho ziye zashintsha ibe simo ajwayelekile - waze uzamile ukudonsa ngesandla esisodwa trifle esikhwameni, thina ukupakisha ipeni sadabuka futhi okuqukethwe peal ebhasini Shuttle. Anti kwakuminyene omkhulu, nokuthatha ngempela ukuma engenangqondo, yena wawaxosha imizuzu emihlanu, ukukha notamatisi.
Khumbula iminyaka 15-20 edlule izikhwama zepulasitiki babengekho thina singabantu ngaphandle kwabo ngandlela-thile ngayo. Kunalokho, bathunywa ukuba wathungela anezikhala kanye string isikhwama wenziwe ngendwangu. Lokhu imfashini liyabuya kithi futhi isikhwama string futhi kuziwa indlu yethu, kodwa namuhla, kushintshile eziningi futhi ubizwa ngokuthi ekosumka. abaklami bodumo bakubheka njengelungelo ukuba unikele Umklamo ukuthuthukiswa abanye babo, futhi izinkanyezi ntshonalanga, ababelwa ukuze kuvikeleke imvelo, bayajabula ukusebenzisa lezi zikhwama yezinhlamvu.
Isithakazelo esinjalo e esebenza izikhwama izinto uqondakala kahle. Okokuqala - akuve elula! Lokhu isikhwama akuyona siphukile, akudingekile ukuba udonse esandleni ehlombe ngisho egcwele phama yezitolo isikhwama ukuba baphathe lula kakhulu. Okwesibili, ukuthi umuntu futhi esibalulekile kimi - iyona izivimbelo ukusetshenziswa polyethylene, okungadingi ukubola iminyaka engu-400.
Manje, ngaphezu ongakhetha isabelomali avosek, kwaqala ukuvela ekosumki ngendwangu abizayo nge malotirazhiruemym kanye nomklamo okukhethekile. Futhi ekosumku okuyisidina ngaphandle iphethini, ungakwazi abeke yisiphi isithombe ngokwabo, izinzuzo ubuchwepheshe besimanje Ungenza lokhu ngisho esikhwameni yezinhlamvu.
Namuhla ngizokhuluma mayelana nendlela wagqoka iphethini isikhwama string nge wokunyathelisa kwesikrini ekhaya. Lapha, ngaba izogxila ubuchwepheshe ukhiye ongayisebenzisa le njongo. Futhi, ngakho, ukuthenga ekosumku, isibonelo, lapha thunga isikhwama wena.
Ukudweba izithombe ekosumku ngu Sublimation. Lokhu indlela digital esigcwele umbala zokunyathelisa. Abakwazi uzitholele yisiphi isithombe, ezifana isithombe noma intandokazi cat izithombe.
Nokho, uma ungumuntu ube ngumuntu onobuqambi, wena amakhadi esandleni sakho, ungakha ekosumku, okuyinto ngeke zisaba ubani futhi wenze yezitolo ijabulisa kakhulu futhi kujabulise.
Ukudweba yesithombe phezu isikhwama yezitolo wokunyathelisa kwesikrini ekhaya. Umgomo we indlela wokunyathelisa kwesikrini silula futhi ungakwazi kalula wenze ngokwakho esikhwameni umklami. By endleleni, lokhu isikhwama kungaba isipho yasekuqaleni futhi ewusizo!
Kanjalo-ke, kudingeka kasilika screen Umdwebo, uzimele (efanelekayo efekethisiwe ayindilinga). Ukuze uthathe stencil ukope, Cellophane noma polyethylene, roller encane (can isakhiwo - bushelelezi) futhi upende acrylic.
Dala isibonelo isikhwama. Image silkscreen kufanele zaveza ngu-6-8 imibala (umbala ngamunye, siyokwenza stencil).
On uzimele sidonsa okuxekethile ucezu inayiloni Indwangu, ezifana inayiloni amasokisi amade ukusuka.
We khiqiza stencil - umbala ngamunye stencil ehlukile. Okubhalwe ngomshini usika ingxenye elidinga ukupenda, khumbula sesikrini yomugqa? Isimiso uyefana.
Ukuthola hhayi ngephutha, egqwalile ngokusebenzisa izikhwama, wafaka ucezu amakhadibhodi ngaphakathi isikhwama
Okubekwe phezu indawo isikhwama, okumele ephrintiwe iphethini, stencil ngoba umbala kuqala, okuyinto has endaweni elikhulu isithombe. Umbala omnyama libhalwe zokugcina.
Ngenhla stencil phezu ifreyimu isikhwama baba welulela Capron.
On the roller sisetshenziswa umbala kuqala bese laminating yona Capron.
Susa uzimele futhi stencil bese ukunikeza uyinki ukuze ome.
Phinda zonke zonke ezinye imibala efanayo, ngobunono ngokuhlanganisa stencil umbala ngamunye.
isikhwama Umklami usulungile. Nobuhle, akunjalo! Uma upende yome ngokuphelele, isikhwama kungenziwa wageza ngaphandle kokwesaba.